FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BOXADOR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Boxador
Alika mifangaro miady amin'ny boxer / Labrador Retriever
Abby the Boxador (mixer Boxer / Lab) amin'ny 2 taona— 'Abby dia antsasak'adiny Laber boxer. Tiany ny mihazakazaka sy milalao alika hafa ary izy tia rano . Abby dia tsara miaraka amin'ny zanako lahy 4 taona ary niaraka izy ireo hatramin'ny fahazazany. Tsy manana olana i Abby saka na osy, fa tia manenjika ONDRIN'I ary misakafo akoho . Tiany ny mihady ary nandavaka lavaka lalina ka nahafahany nanjavona tao. Abby dia sipa lehibe ary mieritreritra fa tena izy amboa lap . Tsy misy zavatra hafa tadiaviny afa-tsy ny ho tia sy hanome ny fitiavany rehetra azy ho takalony. Manana fandokoana mahatsikaiky toy izany ny rehetra dia gaga foana fa Boxer / Lab izy. '
Box - a - VAROTRA
Ny alika Boxador dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny mpanao ady totohondry ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Harley the Boxador amin'ny 2 taona— 'Nentinay tany amin'ny toeram-ponenanay biby i Harley tamin'ny faha-6 taonany. Izy tokoa no alika manan-tsaina indrindra nananako. '
'Dysen dia alika mahafinaritra. Milanja 52 pounds eo ho eo izy. Ny dadany dia Boxer ary ny reniny dia Lab kely. Sambany nihaona taminy izahay tamin'izy 5 andro. Izy dia 4 taona amin'ity sary ity. '
Atolory ilay alika kely Boxador boribory volontany amin'ny 4 volana nilalao tamin'ny baskety volomboasary azy— 'Ratsy nefa tsara. Tsara i Nible amin'ny fampiofanana nataony. Hendry sy tsara tarehy izy. Ny dadany dia Boxer mavo ary ny reniny dia Chocolate Lab. '
Arotsahy ny alika kely Boxador boribory volontany amin'ny 4 volana
Arotsaho ny alika Boxador boribory volontany amin'ny 1 1/2 taona— 'Fanavaozana kely ao amin'ny Boxador Nimble anay. Ankehitriny 1 taona sy 5 volana milanja 27 kg eo ho eo. (59 1/2 pounds). Toa ny a ny volony mpanao ady totohondry volom-borona fa somary matevina sy lava kokoa. Tena sariaka amin'ny ankizy sy ny olona. Ataony mahatsiaro ho miavaka ny olon-drehetra ka tsy lazainay amin'izy ireo hoe tiany izany amin'ny olon-drehetra. Alika tena mahery, milalao, mahery ary falifaly. Manana olana vitsivitsy izy alika tsy azo antoka fa tsara miaraka ny hafa rehetra . Mankato tsara rehefa tiany ny ho. Mbola miasa amin'izany. '
Arotsaho ny alika Boxador boribory volontany amin'ny 1 1/2 taona
Guinness the Boxador amin'ny 2 taona— 'Nahazo an'i Guinness aho hatramin'ny faha-5-taonany. Fantatro fa ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia tezitra rehefa mandray alika lavitra ny reniny izay tanora . Guinness dia zazalahy mahafinaritra sy mahafinaritra ary feno herinaratra. Izy dia tsara miaraka amin'ny alika hafa ary koa amin'ny olona. Nandeha tany amin'ny fikarakarana zaza alika kely 3 andro isan-kerinandro izy ary anontanian'ny ray aman-dreny hafa ny torohevitra momba ny fomba hitondrana ny alikan'izy ireo ho tsara toetra toa an'i Guinness, izay mahatonga ahy hahatsapa ho tsara. Manana bokin'i Cesar Millan maromaro aho, izay toy ny Baiboly ho ahy. Ny fomba fananganana ny alika tonga lafatra amin'ny alàlan'ny alika kely sy mihoatra dia nametraka fototra ho ahy sy Guinness izay azoko natao tamin'ny 2 taona taty aoriana. Noho ny toro-hevitra avy amin'ny bokin'i Cesar dia manana alika aho izay mivoaka miaraka amiko, manomboka amin'ny trano fisakafoanana, hatrany amin'ny fivarotana enta-mavesatra, hatrany amin'ny zaridaina ary na hatramin'ny carwash aza. Manamarina alika serivisy izy amin'izao fotoana izao, izay zava-bita lehibe ho azy. '
Guinness the Boxador amin'ny 2 taona
Duke the Boxador (mixer Boxer / Lab) amin'ny 1 taona— 'Duke dia manana ny toetrany mamy indrindra, tiany ny rehetra. Alika 60 kilao izy ary eo an-tongotro na aiza na aiza alehako. Fantatrao tokoa fa ampahany amin'ny Boxer izy noho ny fampiasany ny kitapony voalohany amin'ny zava-drehetra! Kely ihany koa izy, ka mampiala voly azy mijery azy. Samy maneho ny heviny amin'ny maha-mahafatifaty an'i Duke ny olona rehetra ary tian'izy ireo foana ny hahafantatra hoe alika manao ahoana izy. ”
'Paddy the Boxador tamin'ny faha-14 volana - Boxer ny reniny ary Labrador ny rainy. Efa 9 volana teo ho eo no nananako azy ary nampijalina nandritra ny 4 na 5 volana voalohany tamin'ny fiainany izy. Nihitsoka tao an-dakozia na tao an-jaridaina izy, raha tsy zakany izany, izy. Tsara vintana izy raha nanao dia an-tongotra 1 isan'alina. Tsy nahita alika hafa mihitsy izy mandra-pahatongako azy ary nidina tany amin'ny valan-javaboary (LANITRA). Nomena sakafo ho an'ny olon-dehibe koa isan'andro izy, ary izany dia namela kibo mahatsikaiky azy. Hendry tokoa izy, mianatra fika amin'ny andrana vitsivitsy fotsiny. Nampitony ny entana hatramin'ny nahazoako azy izy. Tiany ny azy mandeha, izay ananany farafahakeliny 3 isan'andro. Mipetraka akaikin'ny ranomasina izahay ary tiany izany rehefa tapitra ny onja. Tiany ny milalao baolina kitra ary tsara loatra ho antsika rehetra izy. Tiany koa ny ala sy ny valan-javaboary any am-paran'ny làlana. Manana horonantsary ao amin'ny YOUTUBE momba azy ho Paddy aho. Ny fianakaviana iray manontolo dia tia azy manaikitra ary izy no reharehan'ny fianakaviana. Tiany ny saosisy, akoho tsotra, vary, paty, pitipoà, ary koa tia cod sy salmon, turkey, henan-kisoa, henan-kisoa, bitro, hena rehetra. '
'Salama, Moose no anarako. Ity ny sariko iray rehefa ny reniko sy ny dadako no nahazo ahy voalohany tamin'izaho 6 herinandro ary sariko tamin'ny 6 volana sy milanja 65 lbs. Tiako ny milalao fakana ary mitaingina fiara. Fantatro fa tsy tokony hiditra vilany ao an-trano ao anatin'ny roa herinandro fotsiny aho, na dia sendra loza vitsivitsy aza aho, saingy tsaroako izao ny milaza amin'ny ray aman-dreniko fa mila mivoaka any ivelany aho rehefa mahatsapa ny faniriana. Tena be fitiavana aho ary milalao tsara amin'ny alika sy olon-dehibe hafa. Neny sy i Dada dia mieritreritra fa hahavita be amin'ny ankizy aho, rehefa hitako ny haben'ny habeko. Indraindray aho dia mieritreritra fa alika am-pofoako, izay OK ho an'i Dada, saingy afaka mavesatra kely ho an'i Neny aho. Manana fahazaran-dratsy aho amin'ny fanaparitahana gazety rehefa omena fotoana, fa mankanesa any amin'inona alika kely izay? Nilaza ny raiko fa manana toetra mahafinaritra aho ary asehoko izany amin'ny tarehy mampihomehy izay ataoko, ary miantso ahy foana ny reniko ho toetra sy ham. Nilaza ny ray aman-dreniko fa tsy hino izy ireo hoe tsara vintana izy ireo nahazo zanak'alika kely manan-tsaina toy izany. '
'Ity no Chopper, hazo fijaliana Boxer / Labrador 20 volana. Eo an-tongotro izy ary ny orony dia ao anatin'ny ataoko amin'ny fotoana rehetra. Lehilahy mahafinaritra izy! Izy no alika mandany fotoana betsaka indrindra nananako. Milalao ho azy ny zava-drehetra ary mandany fotoana be dia be aho 'amin'ny fanariana zavatra.' Misisika ny hatory amin'ny misy ahy izy, eny fa na dia eo amin'ny seza fandraisam-bahiny aza. Izy dia hendry, atletika, mahatoky ary sakaiza mahafinaritra. Tia mitaingina, manenjika ny osy ary haka ny akoho. Azo antoka fa nahazo ny tsara indrindra tamin'ny karazany roa izy. Eto amin'ity sary ity dia niandry ny famindrako manaraka izy fa tsy mandao ny masoko izy. '
Buffee Boxador 5 taona - hoy ny tompony, 'Mbola feno tanjaka be izy. Tianay ny fifangaroan'ny karazany, izy dia be fitiavana sy sariaka loatra indraindray, ny olona rehetra maneho ny heviny momba an'i Buffee, miaraka amin'ny endriny alika kely sy ny masony maneho hevitra! '
'Ity ny ahy laboratoara / mpanao ady totohondry , Durango. 3 taona sy tapany izy. Alika be fitiavana izy, nefa tiany miafina ao ambadiky ny reniko sy ny dadany rehefa eny akaikin'ny olon-tsy fantatra izy na raha maheno tabataba mampivarahontsana hafahafa izy. '
'Tena hendry izy. Isaky ny mahazo kilalao vaovao izy dia mahazo anarana. 2 na 3 fotsiny no mila henoiny, avy eo nataony tsianjery. Raha miteny azy isika mba haka iray dia manao izy. Betsaka ny teny fantany, toy ny: mitaingina, sakafo, vilany, renibe, chips ovy, misakafo… ary maro hafa. Tsy maintsy nanomboka nanoratra teny vitsivitsy isika, ary nandray izany koa izy. '
'Tiany ny milalao fetch sy Frisbee. Mianiana aho fa izy anjara Energizer bunny , tsy mijanona mihitsy izy. Misy fotoana toa tsy dia mahafehy tena izy ary manana olan'ny fanahiana misaraka . Tsy manimba zavatra izy, fa mitohy amin'ny fomba tsy ampoizinao amin'ny alika mitovy habe aminy. Midradradradra sy midradradradra amin'ny fomba mamoy fo izy. Koa satria monina ao amin'ny tanàna iray izahay izao, dia miezaka milalao azy ao an-trano araka izay tratranay izahay, na manipy ny Frisbee ao an-tokontany matetika araka izay azo atao. Tiany rehefa mitsidika an-trano isika amin'izay ahafahany manana hazakazaka malalaka sy milalao miaraka amin'ny sakaizany alika. '
Annabel the Boxador (Lab / Boxer mix) toy ny alika kely 12 herinandro
Annabel the Boxador (Lab / Boxer mix) amin'ny 5 volana
'Ity Bailey, mixer Boxador na Boxer / Lab, eo amin'ny 1 taona. Vao haingana izahay no naka an'i Bailey avy tao amin'ny fialofana iray teo an-toerana ary nahafantatra fa fonenany faha-4 izahay ao anatin'ny herintaona. Tena tia milalao sy be herim-po izy. Tena marani-tsaina izy ary mailaka haingana hahafantatra fika vaovao ampianarintsika azy na ampianariny ny tenany. Entinay any an-toerana izy zaridaina alika isan'andro (indraindray indroa isan'andro) izay ahafahany mihazakazaka 'afaka' ary mifanerasera amin'ny alika hafa. Amin'ny andro izay tsy ahafahantsika mitondra azy mankany amin'ny zaridainan'alika FANAZARAN-TENA mirona izy manimba. Mihevitra izahay fa ny tompona teo aloha dia tsy nanome azy ny habetsaky ny fampihetseham-batana nilainy. Satria tiany ny mihazakazaka sy mitsambikina dia mieritreritra ny hampiofana azy ho alika flyball isika, raha vao voafehy ny fomba fanao. Tena tia milalao izy ary tsy mampiseho herisetra amin'ny alika na olona hafa, na izany aza dia mahaliana azy ireo ny squirrels sy ny saka ary hanenjika azy ireo raha omena fotoana. Izy dia manana olana sasany amin'ny fomba izay heverinay fa noho ny fisian'ireo trano marobe ao anatin'ny fotoana fohy ary tsy fahampian'ny fiofanana. Miara-miasa amin'ny fototra toa azy izahay izao avia, mijanona, miala sns . Na aiza na aiza itondrantsika azy dia mijanona foana ny olona ary manontany anay hoe karazana alika manao ahoana izy ary milaza hoe tsara tarehy izy. I Bailey dia alika milalao mahafatifaty izay reharehanay sy ny fofombadiko mampiseho ary miantso ny 'zanakay'. ”
Toby the Boxador (hazo fijaliana Lab / Boxer) amin'ny 10 volana
Cross the Lab / Boxer cross (Boxador) amin'ny 5 taona. Hoy ny tompony: 'Alika tsara eraky ny manodidina izy.'
'Ity no ½ sôkôlà Lab / ½ Boxer misy antsika antsoina hoe Guinness. Manodidina ny 2 ½ volana izy eo amin'ireto sary ireto. '
Guinness ny ½ sokola Lab / ½ Boxer mifangaro alika kely amin'ny 2 volana
'Ity no finoako alika kely. Izy dia alika kely 30-lb., Boxador (mixer Boxer / Lab) telo volana sy tapany. Izy irery no alika kely tao amin'ny fako nanana orona volontany sôkôla sy maso hazel, ka voatery naka azy fotsiny aho. Ahoana no ahafahan'ny olona tsy mitia an'io tarehy mahafatifaty io ?! Izy dia tamban-kery, miankina amin'ny zavatra foana. Tiany ny milomano amin'ny dobo eo an-toerana, mandehana lavitra any anaty ala, milalao ny kilalaony ary mihazakazaka manodidina ny tokotanin-tsika miaraka amin'ilay kelinay mini Dachshund . '
'Izy mandeha amin'ny tadiny toy ny pro ankehitriny ary efa nianatra azy baiko fototra toy ny mipetraka, mijanona, midina, midina, miala, mihozongozona, miteny, mangina, sns. Izy dia iray amin'ireo alika tsara indrindra nananantsika, ary manantena ny hiaraka aminy aho mandritra ny taona maro. '
'Finoana, zanako Boxador 30-pounds., Telo volana sy tapany ( mpanao ady totohondry / laboratoara mifangaro)'
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Boxador
Sary Boxador 1
Sary Boxador 2
alika lahy 2 ve afaka mifanaraka
Spaniel lohataona anglisy feno taona
collist mix collie anglisy
laboratoara terrain bull terrier